Protectionlọ ọrụ nchekwa ọkụ - Chinalọ ọrụ ndị na-echekwa ọkụ na China Ndị na-emepụta ọkụ, ndị na-eweta ya
Adaba ewu: spraying, ala mkpuchi na brushing nwere ike ji mee ihe. Nkwado siri ike: ọ nwere nkwenye siri ike na ụdị epoxy, ụdị alkyd na ụdị phenolic antirust primer, nke siri ike ma sie ike, nke a na-ejikarị, yana oke mma na ọnụ ala. Cdgc-a ime ụlọ àjà ihe ọ -ụ -ụ dịpụrụ adịpụ dị nchara na-ekpuchi ọkụ ọkụ dabara adaba maka nchekwa ọkụ nke ndị otu na-ebu ibu dị iche iche na-arụ ọrụ nchara nchara karịrị 2 h. Dị ka aerospace, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ike eletriki, nkà mmụta banyere mba, nchekwa mba, ụlọ ọrụ ọkụ na akwa na ụlọ ndị ọzọ dị n'èzí na-ebu ọkụ ọkụ nke akụkụ akụkụ ígwè siri ike, ma dabara adaba maka ụfọdụ ọrụ nchara nchara nwere ọkụ ọkụ nke kemịkal hydrocarbon. (dị ka mmanụ, ihe mgbaze, wdg), dị ka injinị mmanụ ala, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe a na-egwu mmanụ, ebe nchekwa mmanụ na-akwado ya, wdg.